Buuga xasuuqa argagixisada maxaa loo samayn waayay maxaase loo aarsan waayay - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Buuga xasuuqa argagixisada maxaa loo samayn waayay maxaase loo aarsan waayay
Buuga xasuuqa argagixisada maxaa loo samayn waayay maxaase loo aarsan waayay. Kooxda gaalaynta Muslimiinta ayaa dhiiga dadkeena qubeysa habeen iyo maalin.
Kooxdan ayaa inagu dhexnool inala jooga habeen iyo maalin xogteena og waana cadowga koowaad haddii Somali cadow leedahay. Dhaqamada ay wataan ayaa ah kuwo aan diin shaqo ku lahayn.
Haddii dad la iska gaaleeyo oo hadana dhiigooda la banaysto aduunka kamay jirteen diin ISLAAM la yiraa waxana lagu bilaabi lahaa kuwii ugu horeeyay ee qaadan waayay diinta ISLAAMKA.
Laakiin alxamdulilaah diinteenu waa mid ay ugu horeyso nabada iyo ka badbaadinta naarta qofka bani aadamka ah qoyskuu rabo haka dhashee sida masiixi, sanam caabud, Yuhuudi iyo dab caabudba ayadoo loogu sheegayo si nasteexo ah.
Dawlada Somaliya ee diciifka ah ee burburkii dalka ka soo kabanaysa ayna caawiyaan dalalka jaarka ah waxaad moodaa inay ka maqan tahay hal shay oo ay samayn karaan oo ah tirakoobka dadka kooxda gaalayntu disho iyo ku qorida buuga xasuuqa.
Mase garanweyday inay bal halmar u aargudo dadkan ay masuulka ka tahay ayadoo cidkasta ha kaashatee ugu gelaysa hoga kooxdan gaalaynta Muslimiinta ama xataa banaanka soo dhigeysa magacdooda iyo sawiradooda inkastoo haweenka dumarka xirtaan si dadku u ogaadaan.
Waxaan qabaa inay tahay waxa ugu fudud e ay samayn karto. WAxa hubaala in laga seexday xoreynta dhulka welli ku jira gacanta kooxdan gaalaynta Muslimiinta.
Waxa kale oo iyana wax laga xumaada ah magaca loo bixiyay argagixisadan oo dawladu ku sheegaan magic diciifka ah ee nabad-diid, halka kooxdu iyaga u taqaan kuwo diinta ka baxay oo iyagu ka saareen. Magacooda saxda ah waa kooxda gaalaynta Muslimiinta.
Ugu dambeyn dhiiga dadkeena ayaa sidaa u quban doona lamana joojin karo qof kula jooga ku og xataa wax ka duubaya sida dadka u xasuuqeen. Dadka ay adeegsadaan ayaa ah kuwo aad u farabadan oo intooda badan u gala siyaabo kala duwan laakiin u badan dad diintoodu diciif tahay ama maskaxiyan aan dhameyn.